Wholesale Bhodhi mutambo epurasitiki zvidimbu tsika yakatenderera epurasitiki acrylic dhisiki ane mavara disc epurasitiki mabhureki Mugadziri uye vagadziri Kylin
Bhodhi mutambo wepurasitiki zvidimbu tsika yakatenderera epurasitiki acrylic disc marara discs epurasitiki mabheti
Round epurasitiki acrylic disc, isu tinogona kugamuchira akasiyana marudzi, saizi, logo magadzirirwo.
Madhisiki $ 0.05- $ 0.10 / pc
Saizi 12mm / 15mm / 18mm / 22mm / 40mm dia
Kana iwe uine chero matambudziko nezve bhodhi mutambo senge zvinhu, echimiro maumbirwo, ruvara uye saizi, yekudhinda maitiro, epurasitiki kuumbwa zvichingodaro, pls taura neruzivo rwekutengesa uye timu yehunyanzvi. Kana iwe uchida kuti isu tikubatsire iwe kugadzira yako mutambo, isu zvakare tinogona kupa dhizaini rutsigiro zvichienderana neruzivo rwedu.Ona zvinyorwa.
Isu tiri nyanzvi yekugadzira bhodhi mutambo, kadhi mutambo, jigsaw puzzles zvichingodaro. Isu tanga tiri mubhodhi mutambo bhizinesi anopfuura gumi gumi makore. Nemutengo wemakwikwi, mhando yepamusoro, kukurumidza kuendesa, uye sevhisi yakanaka, isu tinowana wepasirese kutengesa network.
Vanogamuchira pachokwadi vatengi vanobva kwese kwese kwenyika kumisikidza kwenguva yakareba kubatana pamwe nesu.
“Tinotenda, zvinhu zviri zvemhando yepamusoro uye ndizvo zvatanga tichida. Nehurombo, zvakawanda zvachinja (nekuda kwe COVID-19) panguva iyi. Iyo purojekiti yataida izvi yakaona shanduko uye hatizodi zvimwe zvikamu panguva ino. Asi tichakuchengetai mundangariro semutengesi mukuru. ”
-Timo Multamaki, Finland
“Iyi yaive nguva yedu yekutanga kuraira nemupi uyu, uye vaibatsira kwazvo uye vaida kupindura mibvunzo nekutumira mifananidzo yechigadzirwa chirongwa ichi chisati chaiswa. Chigadzirwa chacho chaicho sekutaurirana, uye chakasvika nenguva, zvaifadza kuita bhizinesi navo. ”
-Steven Cook, nyika dzakabatana
Pashure: Tsika yepurasitiki mutambo mari yesimbi mutambo mutambo bhodhi yemari mari
Zvadaro: tsika mutambo kuutio misa Wholesale mavara epurasitiki kuutio kuti mutambo
Wooden kushongedzwa tsika mutambo zvidimbu Wholesale ...
Tsika bhodhi mutambo bhokisi dhirowa bhokisi kadhi mutambo bhokisi ...
8mm / 10mm Wholesale tsika simbi ruvara cubes pla ...
Pokerita machipisi mutengesi tsika bhodhi mutambo chishongedzo ...
Board mutambo fekitari Wholesale dambanemazwi mutambo yemapuranga ...
Kadhi Sleeve, Kusimbiswa Makadhi MuMapuranga Anobata, Tsika dzekutamba Makadhi, Tsika Yakadhindwa Playmat, Tsika Dhaisi, Mucheka Mats Bhodhi Mutambo,